IPHONE/IPAD/IPOD Pass Code,Pattern Lock ဖြေနည်း [ကွန်ပျူတာဖြင့်] - ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ)
Home > နည်းလမ်းများ > IPHONE/IPAD/IPOD Pass Code,Pattern Lock ဖြေနည်း [ကွန်ပျူတာဖြင့်]
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) 6:42 PM Pattern Lock ​ဖြေနည်း, Tutorial, နည်းလမ်းများ
IOS တွေမှာ Pattern Lock တို့ Pass Code တို့ကို Restore လုပ်ပြီးဖြေရှင်းကြတာ များပါတယ်။ အခုတော့ ကျတော်ရထားတဲ့ iFun Box အသုံးပြုပြီးဖြေရှင်းနည်းလေး ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ IOS Pattern & Password ဖြည်နည်း နည်းလမ်း(၁) ********************************** 1. ကွန်ပျူတာနဲ့ချိတ်ဆက်ပါ။ 2. iFunBox အသုံးပြုပြီး "Raw File System" (File mgr.) ထဲ ဝင်ပါ။ 3. /Library/MobileSubstrate/DynamicLibraries ထဲဝင်ပြီး AndroidLock နာမည်နဲ့အစပြုတဲ့ ဖိုင်နှစ်ခုကို Delete လုပ်ပါ။ 4. iDevice ကို ပါဝါပိတ်ပြီး ပြန်ဖွင့်ပါ။ 5. မြင်နေကျ "Slide to Unlock" ဆိုတဲ့ screen ကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ ဒါဆိုရင်တော့ Pattern Lock လေး ပျက်သွားပါပြီ။ နည်းလမ်း(၂) ကွန်ပျူတာနဲ့ချိတ်ဆက်ပါ။ **************************** iFunbox ကို ဖွင့်ပါ။ ပြီးလျှင် /var/mobile/Library/Preferences ကို သွားပါ။ com.zmaster.AndroidLock.plist ဆိုတဲ့ File Text Editor တစ်ခုခုနဲ့ ဖွင့်ပါ။ Password eg.123456 ကြားက နံပါတ်များသည် Password ဖြစ်ပါတယ်။ iFun Box မရှိသေးဘူးဆိုရင်တော့....... >>>>>>> ဒီကနေယူလိုက်ပါ <<<<<<< သိပြီးသားသူတွေအတွက်တော့ အပိုကြီးဖြစ်နေပါမယ်။ ကျတော်မသိသေးသူတွေအတွက် ရည်ရွယ်ပြီး မျှဝေပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်တာကြောင့် မလိုအပ်ရင်တော့ မမြင်ချင်ယောင်ဆောင်နေလည်း ရပါတယ်။ ကျတော်ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်တဲ့ အရာတစ်ခုပာာ တစ်ဦးတစ်ယောက်အတွက် အထောက်အကူဖြစ်တယ်ဆို ကျေနပ်ပါတယ်။ ..........::::: အဆင်ပြေပါစေ :::::..........
IOS တွေမှာ Pattern Lock တို့ Pass Code တို့ကို Restore လုပ်ပြီးဖြေရှင်းကြတာ များပါတယ်။ အခုတော့ ကျတော်ရထားတဲ့ iFun Box အသုံးပြုပြီးဖြေရှင်းနည်းလေး ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
IOS Pattern & Password ဖြည်နည်း
1. ကွန်ပျူတာနဲ့ချိတ်ဆက်ပါ။ 2. iFunBox အသုံးပြုပြီး "Raw File System" (File mgr.) ထဲ ဝင်ပါ။
5. မြင်နေကျ "Slide to Unlock" ဆိုတဲ့ screen ကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ ဒါဆိုရင်တော့ Pattern Lock လေး ပျက်သွားပါပြီ။
ကွန်ပျူတာနဲ့ချိတ်ဆက်ပါ။ iFunbox ကို ဖွင့်ပါ။
ပြီးလျှင် /var/mobile/Library/Preferences ကို သွားပါ။
Password eg.123456 ကြားက နံပါတ်များသည် Password ဖြစ်ပါတယ်။
iFun Box မရှိသေးဘူးဆိုရင်တော့... အောက်မှာဒေါင်းလော့ရယူလိုက်ပါ
ကျတော်မသိသေးသူတွေအတွက် ရည်ရွယ်ပြီး မျှဝေပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်တာကြောင့်
မလိုအပ်ရင်တော့ မမြင်ချင်ယောင်ဆောင်နေလည်း ရပါတယ်။
ကျတော်ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်တဲ့ အရာတစ်ခုပာာ တစ်ဦးတစ်ယောက်အတွက် အထောက်အကူဖြစ်တယ်ဆို ကျေနပ်ပါတယ်။
::::: အဆင်ပြေပါစေ :::::
Ref:Kaung Htoo San